गल्ती उहिले, सकस अहिले | Nagarik News - Nepal Republic Media
गल्ती उहिले, सकस अहिले
१५ फाल्गुन २०७४ १२ मिनेट पाठ
मंसिर २५ गते २०७४ मा नागरिकमा प्रकाशित ‘सन्तानलाई सास्ती’को एउटा पाठकले भारतका मिर्जाफरसित मिल्ने एउटा उदाहरणीय सत्यकथा सुनाए । नेपालको एउटा कलेजमा प्रिन्सिपलको पद खाली हुन आयो । त्यसका दुई प्रत्यासी थिए । एउटा सिनियर र अर्को जुनियर।
साधारण प्रक्रियाबाट सिनियर प्राध्यापकले सो पद पाए । तर जुनियर चाहिँ निराश भए र कसरी नयाँ प्रिन्सिपललाई हटाई सो पद आफूले हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने धन्दामा लागे । एउटै कलेजमा पढाउने भएकाले उनीहरू साथीभाइ थिए र एक अर्काबारे सबै वृत्तान्त थाहा थियो । प्रिन्सिपलको जीवनमा घटेको एउटा कमजोरी उनका जुनियर प्राध्यापकलाई थाहा थियो । स्कूलमा पढ्दा प्रिन्सिपलका बुबाले फिस तिर्न पैसा नभएर छिमेकीको कुखुरा चोरेर बेचे र त्यही पैसाले आफ्नो छोराको फिस तिरिदिएका थिए।
यही घटनालाई जुनियर प्राध्यापकले कलेजका केटाकेटीबीच फैलाइदिए । ‘हाम्रो प्रिन्सिपल साहेब त कुखुरा चोरको छोरा रै छ’ भनेर एक कान दुई कान कलेजभर फैलियो । त्यही कलेजमा उनका छोरा र छोरी पनि पढ्दै थिए । उनका साथीहरूले ‘कुखुरा चोरको नाति’, ‘कुखुरा चोरको नातिनी’ भनेर खिज्याउन थाले । दुई चार दिन त त्यसै गुज्रे तर साथीभाइहरू बीचमा यो क्रम रोकिएन । प्रिन्सिपलका छोराछोरीलाई असह्य भएपछि उनीहरू कलेज जान छाडिदिए । प्रिन्सिपलप्रति पनि कलेजका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको दृष्टि बदल्दै गएको उनले महसूस गरे । केही महिनामा नै उनले राजीनामा गरे । नेपालमा बस्दासम्म यो लान्छनाबाट आफ्ना छोराछोरीलाई कठिन हुने भयो भनेर उनले देशै छाडेर गए । एक प्रकारले त्यो परिवार नै नेपालबाट विस्थापित हुन गयो।
आफ्ना सन्तानलाई कुनै सास्ती नहोस् भन्नाका लागि नै देशलाई हानि–नोक्सानी हुने काम हाम्रा नेता र सत्ताधारीहरूले नगरून् भन्ने हो । त्यस मानेमा कुनै पनि नेपालीले नेपाललाई क्षति हुने काम नगरोस् भन्ने हो।
सो पाठकको विचारमा नेपालमा पनि भारतको मिर्जाफरको घटनाजस्तै घटिरहेकै छन् । त्यसैको एउटा उदाहरणस्वरूप उनले यो कथा सुनाएका हुन् । आफ्नो बाजेले कुखुरा चोरेको एउटा गल्तीको कारण उनका नाति नातिनीहरूले सास्ती बेहोर्नु प¥यो । मलाई पनि यस्तै एउटा घटनाको सम्झना छ । मेरो गाउँका एक जना साधारण मानिसलाई चोरीको मुद्दा लाग्यो । उनी गाउँमा बस्न सकेनन् र काठमाडौँ आए । एउटा सानो होटल चलाएर गुजारा चलाए । तर उनको परिवार र छोराछोरीहरू गाउँमै बसिरहे।
छिनछिनमा चोरको परिवार, चोरको छोरा, चोरकी छोरी भन्ने लाञ्छना लागि नै रह्यो । हुन त उनीहरूको केही गल्ती थिएन तर उठ्दा बस्दा र विवाद हुँदा यो लाञ्छनाले उनीहरूलाई छाडेन । अरू परिवारहरूले जस्तो उनीहरूले कुनै प्रगति गर्न सकेनन् । जीवनभर लज्जित भएर बसे । गाउँ छाडेर जाऊन् पनि कसरी ? पढेलेखेका थिएनन् । कालान्तरमा सो परिवार नाश भएर गयो । चोरीको दोष लागेको बाबुको पनि काठमाडौँमै मृत्यु भयो । यस्तो सानोतिनो घटना र लाञ्छनाबाट आफ्ना सन्तानले कसरी दुःख पाउँदा रहेछन् र नाश पनि हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण समाजमा जताजतै पाई नै रहन्छौँ । मिर्जाफरको घटनाले नेपालको राजनीतिमा भइरहेको विकृति र देशद्रोहतिर हाम्रो ध्यान तानेको छ । नेपालका राजनैतिक मिर्जाफरहरूको कारणले उनीहरूका सन्तान–दरसन्तानले पनि कष्ट भोग्ने अवस्था आइरहेको देखिन्छ।
यस्तै एउटा घटना नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले माघ १६ २०७४ सालको अंकमा उजागर गरेका छन् । करिब ७० वर्ष अगाडि नेपालका एउटा नेता र मन्त्रीले भारतीय सेना नेपालमा राख्ने सम्बन्धमा एउटा ऐतिहासिक प्रसंगबाट उनका नातिनीलाई भावनात्मक चोट पुग्न गयो भन्ने उजागर गरिएको छ । यसको उठान इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालद्वारा नागरिकमा प्रकाशित गत कात्तिक २६ गते २०७४ मा ‘हाम्रो सुरक्षा नीतिमा भारत’ शीर्षक लेखबाट भएको होे । सो लेखमा नेपालले लेखेका थिए, ‘डा.डिल्लीरमण रेग्मी परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला यातायात मन्त्री भद्रकाली मिश्र थिए । यिनी नेहरूका नजिक थिए । यसर्थ पहिलो मन्त्रिमण्डलमा तराईको प्रतिनिधिका रूपमा नेहरूकै जोडमा यी मन्त्री भएका थिए । यिनीहरू पालैपालो मन्त्री हुन्थे।
यिनैको पहलमा परराष्ट्र मन्त्रीले भारतमा एक गोप्य सम्झौता गरे । यो सम्झौता अनुसार नेपालमा भारतीय सैनिक राख्ने र दिल्लीकै परराष्ट्र नीति अनुसारै नेपालको पनि परराष्ट्र नीति तय गर्ने भन्ने थियो । यसपछि डिल्लीरमण रेग्मीले नेपालमा जति पार्टी नेता छन्, ती सबै भारत विरोधी छन्, एउटा मेरो पार्टी मात्र भारत अनुकूलको छ अर्थात् म मात्रै भारतको मित्र हुँ भन्ने खालको वक्तव्य दिएका थिए । भारतको अनुकूल भएर बिपी विरोधी उनी राजप्रासादबाट प्रधानमन्त्री हुने दाउमा थिए । तर सम्भव भएन ।’
‘नेहरू स्मृतिपत्रको यथार्थ’ शीर्षकको लेखमा गुणराज लुइँटेल लेख्छन्, ‘यी वाक्यांशमा उल्लेख भएअनुसार डा. रेग्मीलाई नेहरूको निकट भएको र भारतीय सैनिक राख्ने र दिल्लीकै परराष्ट्र नीति अनुसार काम गर्ने भनी आरोप लगाइएको छ । तर इतिहासका तथ्यहरूले त्यसो नभन्ने उनकी नातिनी अवन्तिका रेग्मी बताउँछिन्, त्यो बेलाका ऐतिहासिक तथ्यबारे अनुसन्धान पनि गर्दै छन् ।’ उनले अन्तिममा लेखेका छन्, ‘यति निकटको इतिहासका घटनामा समेत अलमल देखिन्छ । अचेल यस्ता सामग्री कसैले पनि लिखितरूपमा नराख्ने हुनाले भविष्य झन् अन्योलग्रस्त हुने देखिन्छ ।’ यो ऐतिहासिक तथ्य र अनुसन्धानको विषय भएकाले यस विवादको समाधान तुरन्त हुने होइन । तर एउटा राष्ट्रियताको विवाद निस्किहालेकाले विवादित व्यक्तिका सन्तानलाई चोट पुग्न गएको देखिन्छ । यस्तो घटनाबाट हाम्रा सत्ताधारीहरूले पाठ सिक्लान् कि भन्ने आशा हो।
यस्तो घटनाले कस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर भारतको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । अठारौँ शदीका मिर्जाफरमाथि लागेको ‘नमक हराम’को लान्छना मेटाउन उनका आठौँ पुस्ता सन्तान लागेका छन् । सैयद मोहम्मद रेजा अलि खान एक शिक्षक हुन् र आफ्नो बराजु मिर्जाफरको नाउँबाट यो देशद्रोहको आरोप मेटाउन ऐतिहासिक अनुसन्धानमा लागेका छन् । किनभने, २५० वर्षपछि पनि उनी र उनका परिवारले यसबाट दुःख पाइरहेका छन् । बंगालको मुर्सिदावादस्थित उनको घर हेर्न अझ पनि पर्यटकहरू जाने गरेका छन् र उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गर्ने गर्छन् जुन सुनेर खानको परिवारलाई मरेतुल्य हुन्छ । यस्तो कुरा सुनेर बचपनमा खानलाई साह्रै रिस उठ्ने गथ्र्याे । त्यसैले उनले ऐतिहासिक तथ्य पत्ता लगाएर त्यो कलंकबाट मुक्त हुन कोसिस गरिरहेका छन् । उनको भनाइ के छ भने जुन बेला यो घटना घट्यो त्यो समयमा राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने भावना थिएन।
आजको राष्ट्र र राष्ट्रियताको युगको मूल्य मान्यता त्यो बेला न थियो, न कसैले बुझेको थियो । त्यो बेला साम, दाम, दण्ड, भेदबाट मानिसहरू सत्तामा पुग्ने गरेका थिए र उसरी उनका बराजु मिर्जाफर पनि नवाव भएका थिए । नवाव हुनका लागि अंग्रेजसित मिल्न गएको र आफ्नै नवावलाई धोका दिएको कुरालाई भारत राष्ट्रसित गाँस्न मिल्दैन । त्यो बेला भारत भन्ने राष्ट्र नै थिएन भन्ने उनको भनाइ छ । उनको तर्क र विचार केही इतिहासकारहरूले सुनिरहेको पाइन्छ तर आम जनतामा यसको असर परेको देखिन्न । यस्तो सास्ती आफ्ना सन्तानलाई नहोस् भन्नाका लागि नै देशलाई हानि–नोक्सानी हुने काम हाम्रा नेता र सत्ताधारीहरूले नगरून् भन्ने हो । त्यस मानेमा कुनै पनि नेपालीले नेपाललाई क्षति हुने काम नगरोस् भन्ने हो।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ १०:४८ मंगलबार
गल्ती उहिले सकस अहिले